Bukela i-YouTube ku-TV - Ungayenza kanjani isebenze ngekhodi? - Ezokuzijabulisa
I-YouTube ayidingi isingeniso. Kungaba izifundo zesikole ogeje ngazo noma isibuyekezo sesoftware esidingekayo ongazi ukusifaka, futhi i-YouTube iyakusiza. UChad Hurley usungule le vidiyo yokusakaza nokwabelana ngamavidiyo, uSteve Chen, noJawed Karim ngomhla ka-14 kuFebhuwari 2005.
Inomkhulu wayo kuISan Bruno, eCalifornia.USusan Wojcickiuyi-CEO yamanje ye-YouTube. Ngokuya nge-Statista 2019, i-YouTube inama-2 Billion abasebenzisiInenzuzo ephelele ye-1514.9 crores USD kusukela ngo-2019. AbakwaGoogle bathenga i-Youtube ngoNovemba 2006, yingakho manje sekuyinsizakalo.
Isidingo se-YouTube TV:
Njengoba opharetha bezintambo abaningana besinikeza iziteshi, umbuzo ophakamayo uthi kungani i-YouTube TV? Impendulo yalokhu ilula: Iyasijabulisa futhi ifakazele ukonga uma kuqhathaniswa nezinketho zekhebula. Nazi izici ezimbalwa zokuthi kungani kufanele ucabangele i-YouTube TV:
It has smart navigation, okwenza imibukiso ye-TV ebukhoma ifinyeleleka kalula.
Ababhalisile banenketho yokurekhoda imibukiso yokuzikhethela kwabo okuhlala kulandwa izinsuku ezingama-90.
Uma nje unokuxhumeka okuzinzile kwe-inthanethi (cishe isivinini sokulanda esingama-60 Mbps), ngeke uhlangabezane nezinkinga zokubhafa noma ukubonisa imilayezo yamaphutha.
Isici sezomnotho ukuthi ungathola ezokuzijabulisa mahhala ngokuphelele.
Uma kuqhathaniswa noxhumo lwe-TV olushibhe kunawo wonke, i-YouTube TV ikongela okungenani u- $ 33. Yindlela oyonga ngayo imali i-YouTube ngokusika intambo ngaphandle kokuyeka iziteshi zakho okumele ube nazo.
Ungayibuka Kanjani i-Youtube kuthelevishini?
Abafundi abaningi bazibuza ukuthi bahambe kanjani ngokubuka i-Youtube kumadivayisi wakho we-TV. Le nqubo ilula kakhulu kuningi lethu. Singasakaza kalula ngamapulatifomu ahlukene atholakalayo.
Uhlelo lokusebenza lwe-YouTube lusebenza kuwo wonke amadivayisi we-Smart TV neziduduzi zemidlalo. Uma futhi une-media house PC setup, kuzoba wusizo impela ekusebenziseni kwakho. Sincoma ukuthi uzame namuhla ngosizo lwakho.
Izinyathelo zokubuka i-YouTube ku-TV:
Iya kumenyu yohlelo lwakho lwe-TV bese uhlola ukuthi ingabe inalo yini uhlelo lokusebenza lwe-YouTube olufakwe kuqala. Uma kungenjalo, yiseshe esitolo sohlelo lokusebenza lomenzi we-TV. Kumadivayisi amaningi we-TV ahlakaniphile, i-youtube isivele itholakalela ukusetshenziswa kwakho.
Umsebenzisi angangena ngemvume esebenzisa i-akhawunti yakhe yakwa-Google ngokugcwalisa igama lomsebenzisi nephasiwedi yakhe. Ngemuva kokungena ngemvume, manje uzobona konke okubonayo kuzinguqulo zakho zeselula nedeskithophu njengamavidiyo, izinhla zokudlalayo, nezincomo ze-YouTube.
Uma ufuna ukulawula i-YouTube yakho nge-PC yakho yedeskithophu, ithebhulethi, ikhompyutha ephathekayo, noma ifoni, noma enye idivayisi ngaphandle kwesilawuli kude se-TV yakho, ungaxhuma idivayisi yakho ku-TV yakho usebenzisa ikhodi ekhiqizwe ngokukhethekile. Zulazula kwisithonjana sezilungiselelo ezansi kwesobunxele sohlelo lokusebenza lwe-YouTube bese ukhetha inketho‘Xhumanisa nekhodi ye-TV.’
Qaphela ikhodi ye-TV, engatholakala kusinyathelo 3. Vula uhlelo lokusebenza lwe-YouTube kunoma yimaphi amadivayisi wakho bese ukhetha‘Izilungiselelo’kusuka kusithonjana sephrofayela yakho. Okulandelayo, thepha'Bukela ku-TV'bese 'Faka i-TV Code'bese uthayipha ikhodi oyibhale phansi ekuqaleni.
Ngokufanayo, ungaxhuma ne-PC yakho yedeskithophu noma ilaptop ne-TV yakho ngendlela efanayo. Vele uvakashele https://youtube.com/activate bese ufaka ikhodi kusuka kuThelevishini yakho ebhokisini elibhalwe ukuthi ‘Xhumanisa nekhodi ye-TV'bese uchofoza ku'Faka le TV. ’
Ungayinqamula Kanjani Idivayisi?
Uma uvula uhlelo lokusebenza lwe-YouTube kuthelevishini yakho, uzothola isithonjana sezilungiselelo ngezansi kwesokunxele. Thepha ‘Amadivayisi axhunyiwe'bese ukhetha'Susa wonke amadivayisi', noma unganqamula wonke amadivayisi ngawodwana.
Izici ze-Youtube ku-TV:
I-Youtube kuThelevishini yenza kube lula kubasebenzisi ukuthi babuke okuqukethwe kwamahhala ku-inthanethi. Izigidi zabadali zilayisha njalo. Sincoma ukuthi usebenzise insiza ukuze uyisebenzise kalula. Kuhle ukuthi abantu baqale ngokusakaza ngempumelelo endaweni yesikhulumi. Yizame namuhla bese uthola umuzwa omuhle wokuzijabulisa. Nazi izinyathelo.
1. Imiyalo yezwi
Ukubuka i-Youtube kuthelevishini kukhululekile ngesicelo. Abasebenzisi bathola isici sokufinyeleleka sezenzo zezwi kungxenyekazi. Ilungele labo abadinga ulwazi lwesikhathi eside. Sincoma ukuthi uzame lesi sici namuhla. Isilawuli kude se-TV sizokusiza ngemiyalo yezwi nokusesha.
2. Ukusakaza kwe-HD
Ukulungiswa kwe-TV yakho kudlala indima enkulu ekunqumeni ikhwalithi yokusakazwa kokuqukethwe. Abasebenzisi bangasakaza kalula ngo-1080P nangezinga eliphakeme. Udinga ukuba ne-inthanethi enejubane elikhulu ukuxhasa le khwalithi yokusakaza. Kukonke okwenzekile kunenzuzo enkulu kulabo ababhalisayo.
3. Ukwenza imisebenzi eminingi
Amadivayisi amaningi we-smart TV angasakaza kalula okuqukethwe nge-youtube futhi enze umkhiqizo ngenye. Kuyisici esitholakala njengamanje kumamodeli ambalwa kuphela. Siyasithanda lesi sici futhi sijabulela izinzuzo ezinhle eziza nohlelo lokusebenza.
Kumane nje kuyiphuzu leqhwa kubasebenzisi abasepulatifomu. Sincoma ukuthi uzame namuhla futhi uqale ukuthola ukuzijabulisa kuzikrini ezinkulu.
I-Youtube nayo iza nensizakalo yokusakazwa kwesiteshi se-Live TV. Okwamanje itholakala e-USA kuphela. Abasebenzisi bangabuka iziteshi eziningi ngokubhaliselwe kwe-premium. Izindleko ziphansi ngokuqhathaniswa nezinye izinsizakalo ze-DTH.
Okuhlangenwe nakho kwakho kukonke kuzoba okuphawuleka kakhulu. Abasebenzisi bangathola imiphumela emangalisayo kule nkundla.Kuzokusiza ukuthi ushintshele kokuhlangenwe nakho okungenantambo ngokuphelele.
Ngakho-ke ekugcineni, ukubheja kwakho okuhle kakhulu kuzoba ukunikeza I-YouTube iyisilingo gijimisa ukuze ubone ukuthi ziyazifanela yini izidingo zakho noma cha. I-Google inikezela ngesivivinyo samahhala seviki elilodwa kunoma ngubani ofuna ukukuzama futhi abone izici zayo. Awudingi ukukhokha izindleko zenyanga zokubhalisa. Ungabhalisa kwikhompyutha yakho yedeskithophu ngesiphequluli sewebhu futhi ujabulele isilingo sakho samahhala.
I-Sling TV vs YouTube TV - Iyiphi Insiza Ehamba Phambili?